Waa maxay shuruudaha Somalia ku xireyso qaadka Kenya? | KEYDMEDIA ENGLISH
Waa maxay shuruudaha Somalia ku xireyso qaadka Kenya?
Sanadihii la soo dhaafay, muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa aad ugu dhibanaa socdaalka iyo dal-ku-galka Kenya, halka kuwa Kenyaanka ah oo hore dal-ku-galka Soomaaliya qaadan jiray marka ay ka degaan garoonka Aadan Cadde, lagu qasbay inay online-ka ku sii dalbadaan ka hor safarkooda.
NAIROBI, Kenya – Sida uu Jimcihii sheegay Wasiirka Beeraha Kenya Peter Munya Dowladda Kenya ayaa dib u bilaabaysa dhoofinta qaadka Miraa oo ay ku daabuli jirtay Soomaaliya muddo labo todobaad gudahood ah kaddib wadahadallo Muqdisho iyo Nairobi dhexmaray khamiistii.
Hadalkan ayaa daba socda wadahadal ay yeesheen Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hoggaamiyaha Kenya Uhuru Kenyatta, kadib caleema-saarkii MW Xasan Sheekh oo dhacay khamiistii, kaasoo ay ka soo qeyb galeen inta badan madaxda dalalka Bariga Afrika.
Mr Munya ayaa sheegay in joojinta Qaadka Kenya laga keeno ay si weyn u saameysay dhaqaalaha dalkaas, isla-markaana hoos u dhac weyn uu ku yimid dhaqaalihii ay ka heli jireen maandooriyaha, isagoo ku eedeeyay go’aanka lagu hakiyay qaadkii ka imaan jiray dalkaas, MW hore Farmaajo.
Hayeeshee, Soomaaliya ayaa xujooyin saddex qodob ka kooban hor dhigi doonta Kenya, ka hor inta aan la saxiixin in dib loo fasaxo suuqii qaadka, kuwaasoo kala ah; Fududeynta safarka, Dhoofinta Kalluunka iyo Ururka Bulshada Bariga Afrika, kaasoo Soomaaliya muddo raadineysay in ay ku biirto.
Soomaaliya waxa ay miiska saari doontaa in la fududeeyo isku socodka labada dal, meeshana laga saaro duulimaadyada shacabka ee maraya gobollada ka hor inta aysan gaarin Nairobi, inta uu socodo kulanka IGAD oo lagu wado inuu ka qabsoomo Nairobi maalinta Talaadada ee soo socota.
Sidoo kale, Soomaaliya waxa ay dooneysaa in Kenya ka dhabeyso qodob dhowr jeer oo hore la isla soo hadal qaaday kaasoo ah in Kalluunka Soomaaliya loo dhoofio dalkaas, taasoo waddo u furi karta badeecooyin kale oo laga dhoofin karo Soomaaliya, sida dalagyada beeraha iyo xoolaha nool.
Xogta ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegeysa in Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhiggiisa Kenya Uhuru Kenyatta, kala hadlay sidii dowladdiisu kala shaqeyn lahayd xubin ka noqoshashada Ururka Bulshada Bariga Afrika, kaas oo magaciisa loo soo gaabiyo EAC.
Daladdaas waxaa qeyb ka ah dalalka Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda, Suudaanta Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga ah ee Koongo, kuwaas oo ku heshiiyay in dhammaan muwaadiniinta dalalkaas ay waddamadan isaga kala gooshaan, ganacsi xor ahna isu kala gudbiyaan si fudud.
Dowladda cusub waxa ay ku biiritaanka ururkaas u aragtaa fursad ay u aayi doonaan ganacsatada Soomaaliyeed, waxaana Kenya oo xubin firfircoon ka ah daladdaas loo arkaan in ay Soomaaliya kala shaqeyn karto ku biiritaanka East African Community [EAC] maadaama ay hore arrinkaas uga caawisay South Sudan.
Tallaabadan ayaa u muuqata mid ka careysiin doonta Itoobiya oo labadii sano ee ugu dambeysay si weyn uga faa’iideysatay Qaadka la keeno Soomaaliya, taasoo hurin karta xiisad ka dhex aloosanta Addis Ababa iyo Nairobi, xilli Khamiistii kaamirooyinku qabteen Uhuru Kenyata oo salaanta la agmaraya Abiy Axmed.
Wax ka yar hal isbuuc, Kadib markii la raacdeeyay safiirkii Kenya, waxaa garoonka Aadan Cadde, soo caga-dhigatay diyaaradda National Airways of Ethiopia, oo sidda Qaadka HAREERI, waxaana ka ganacsiga maandooriyaa loo xiray walaalka Farmaajo, Xasan Cabdullaahi Farmaajo, ‘Xasan Nuur’ iyo koox saaxiibo la ah.